काठमाडौं । आज भन्दा करिव १२ बर्ष अगाडिबाट देखि वा गत २००६ देखि २०१७ बीच तीस लाख मानिसहरुको ट्वीटरमा गरिएको पोष्टको विश्लेषण गरिएको छ । उक्त विश्लेषण बाट झूटो समाचार साँचो समाचार भन्दा धेरै नै छिटो फैलिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
म्यासाचुसेट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सिनान एरल र सहकर्मीहरुले गरेको उक्त अनुसन्धानमा ट्वीटरका १२६००० ‘कथा’हरु तथा पोस्ट हरु लाई पछ्याइएको थियो । ट्वीटरमा गरिएको कुनै दावीलाई कथा मानिएको थियो ।
त्यसका लागि त्यो कुनै समाचार संस्थाको निश्चित समाचारनै हुनुपर्दैन थियो । ती दावीहरुको सत्यता छ वटा स्वतन्त्र सस्थाहरुद्धारा अनुसन्धान गरिएको थिया ।
त्यसमा विभिन्न संस्थाहरुले सहभागि गरेर अनुसन्धान गरेको थियो जसमा स्नोप्स, पोलिटिफ्याक्ट र फ्याक्टचेक जस्ता संस्था पनि थिए । “हामीले जे पायौं त्यो डर लाग्दो थियो”, एरलले भने, “झूटो समाचार साँचो समाचार भन्दा हरेक शीर्षकमा धेरै छिटो फैलिएको पाइएको छ ।”
सत्यपूर्ण ट्वीट ट्वीटरका १५०० मान्छेमाझ फैलिँदा झूटो समाचार छ गुणा बढीसम्म फैलियो । र, भाइरल हुने अधिकांश झूटा समाचार राजनैतिक प्रवृत्तिका कारणनै फैलिएको पाईएको अनुसन्धान बाट खसलेको छ । मानिसहरुले गलत सूचना अनेक कारणले ‘शेयर’ गर्छन् तर तीब्र सम्बेदना प्रतिक्रियाले मानिसलाई झूटो समाचार फैलाउन प्रेरित गर्ने सम्भावना बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
“ती सबलाई जोड्नु भयो भने ठ्याक्कै शब्दकोशले दिने ‘आक्रोश’को परिभाषा पाउनुहुन्छ”, झूटो समाचारको अध्ययनमा संलग्न बन्गोर विश्वविद्यालयका भियन बकिर समेत विश्वास गर्छन् “झूटो समाचार ती भावना उत्पन्न गर्ने हिसाबमा लेखिएका हुन्छन् ।”
यसको अतिरिक्त ख्याल गरिनुपर्ने कुरा मानिसलाई निश्चित समाचार सामाग्री ‘शेयर’ गर्न प्रेरित गर्ने प्रेरणा हो । “केही मानिस समाचारको सही गलत हेर्दैन बरु यी कुरा तिनीहरु सम्पर्कमा रहेको साथीसगंतले सुन्न चाहने कुरा भएकाले शेयर गर्छन्”, बकिरले भनेका छन् ।
प्रकाशित : सोमबार, फागुन २८, २०७४१३:४२
विश्वको सबैभन्दा महँगो नेल पोलिश, अहिलेसम्म केवल २५ जना खरिदकर्ता
रातो गुलावले मायाँ बाहेक अरु पनि त अर्थ लाग्दो रहेछ….
विश्वका यी रोचक तथ्यले तपाईलाई अचम्मित बनाइदिनेछ !
कण्डमको आकार सानो भएको भन्दै चाईनिज कम्पनी प्रती आपत्ती
४३ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका